लक्ष्मी पुजाको दिनमै इटहरीमा भयो ठुलो आगोलागी ! यिनै हुन् जसले आगो नियन्त्रण लिनको लागि गरे यस्तो सहयोग नायकहरू-Nepali online news portal
लक्ष्मी पुजाको दिनमै इटहरीमा भयो ठुलो आगोलागी ! यिनै हुन् जसले आगो नियन्त्रण लिनको लागि गरे यस्तो सहयोग नायकहरू
इटहरीः बुधबार इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रमा भएको आगलागीको घटनामा इटहरी उपमहानगरपालिकाको अग्नि नियन्त्रण शाखालाई पहिलो खबर पुुग्यो । खबर पुुगेको २ मिनेटभित्रैमा तयारी अवस्थाको दमकल लिएर घटनास्थलमा पुुगे सो शाखाका सदस्य तथा दमकल चालक देवराज चौधरी ।
चौधरी १ बज्ने बित्तिकै इटहरी चोकको उत्तर दिशाको मुखैमा रहेको सप्तकोशी इलेक्ट्रोनिक्समा भीषण आगलागी भएको घरमा दमकल लिएर पुुगेका थिए । उनी पुुग्दा अवस्था निकै नाजुक थियो । आगोको लप्काले थप पसलहरूमा क्षति पुगिरहेको थियो । इलेक्ट्रोनिक्स पसलभित्र रहेका रेफ्रिजेरेटर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । कार्टुनभित्र रहेका रेफ्रिजेरेटरहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा थिए । उनले हतपत दमकलको भर्याङ तयार पारे र अन्य सदस्यहरूको सहयोगमा पानी फ्याँक्न थाले । बलिरहेको आगोमाथि पानी फ्याँक्ने चौधरीले भने, ‘हामी चौबिसै घण्टा तयारी नै हुन्छौँ । आज पनि खाबर आउनासाथ दौडिहाल्यौँ ।’
चौधरी पुुगेको ५ मिनेटभित्र पुुगे अर्का सदस्य तथा चालक मकरबहादुर महत । उनले आफ्नो टिमलाई त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिए । थप के कुरा आवश्यक पर्छ त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएर उनी टिम लिएका पुगेका थिए । महत पुग्दानपुग्दै चौधरीको दमकलको पानी सकियो । चौधरी पानी लिन इटहरी उपमहानगरभित्र रहेको पोखरीमा गए । आगो नियन्त्रणको जिम्मेवारी महतले सम्हाले ।
महतले आफू पुुग्दा जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टीम पनि आइपुुगेको बताए । ‘चौधरी पुग्नुअघि प्रहरीको मात्र टिम थियो । हाम्रो साथीहरू र प्रहरीको थप खबरले सशस्त्र र सेना आइपुग्यो,’ उनले भन
दमकल चालक चौधरी र महत फिल्डमा रहँदा यता इटहरी उपमहानगरपालिकाको अग्नि नियन्त्रण शाखाका प्रमुख जेबी राई आगलागीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै अन्य शहरका दमकल बोलाइरहेका थिए । उनी घटनाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै सोबारे अन्य निकायमा पनि खबर गर्ने र दमकल बोलाउने काममा खटिए ।
उनले बोलाएका मध्ये सबैभन्दा पहिले दुहबीको दमकल आयो । त्यसपछि क्रमशः धरान, इनरुवा, सुन्दरहरैंचा, विराटनगर, दमक लगायतका शहरका दमकल आइ पुुगे । ८ वटा दमकलको अथक प्रयासले करिब ३ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा आयो । अग्नि नियन्त्रक, १ सय ५० जना नेपाली सेना, ५० जना सशस्त्र प्रहरी र करिब ५० जना नेपाल प्रहरीका साथै स्थानीयको सहयोगले इटहरीको मुुख्य बजार क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन सफल भयो ।
मुुख्य बजार क्षेत्रमा घरहरू बाक्लै भएको हुँदा यसले थप जोखिम निम्त्याउन सक्थ्यो । तर, खबर गर्नेबित्तिकै पुुगेका अग्नि नियन्त्रकको कार्यले बढी क्षति हुन पाएन । आजको घटनामा अग्नि नियन्त्रकहरू नायकको रूपमा चित्रित भए । घटनामा कति क्षति भयो भन्ने बारेमा कुनै तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन ।
दिनभर काममा खटिएका राईसहितको टिमलाइ प्रदेश पोर्टलले भेट्दा थप नोक्सानी हुनबाट बचाउन सकेकोमा उनी खुशी देखिन्थे । छिमेकी नगरका दमकललाई बिदाइ गरिरहेका राईले भने, ‘हामी सबै टिमसहित दत्तचित्त भएर काममा लागिप¥यौँ । जसको परिणामस्वरूप आगो नियन्त्रणमा आउन सफल भयो ।pradeshportal.com